Xa uthanda umntu, ngoko yonke into uzama ukubona umnqweno wakhe wokuba ube nani ngonaphakade. Kodwa, ngamanye amaxesha sisebenza ngokukhohlisa. Indlela yokwahlula umnqweno onyanisekileyo wendoda evela kwiingcamango zethu? Kuthetha ukuthini le nto okanye loo nto? Isangqa njengesipho - ukubandakanya ngaphambi komtshato okanye nje umqondiso omhle?
Ukuze uqonde isandi njengesipho - ukubandakanyeka phambi komtshato, kufuneka uhlolisise imeko, amagama kunye nokuziphatha kwalo mfana.
Ngoko, lo mqondiso uthetha ntoni? Okokuqala, makhe sibone, ngantoni na, indoda inika indandatho? Mhlawumbi nje uyazi ukuba nayiphi na isandi isipho esona sihle kunazo zonke kwaye ufuna ukukwenza kube mnandi, kodwa ngokungekho ngokupheleleyo ngaphandle kwezinto oziphuphayo. Khumbula ukuba umntu ophethe izipho ezinjalo kulula. Ukuba uyazi ukuba uyathanda iinqwelo ezinjalo, ke lesi sipho sinengcamango efanayo, esiza kubonisa isipho okanye indlebe okanye isongo. Ukuba loo mntu wanikezela indandatho yokuzalwa kwakhe kwaye akazange athi igama malunga nento afuna ukuba nayo ebomini bakhe bonke, mhlawumbi wenza isipho esilungileyo sosuku lwegama kwaye akukho nto. Kakade ke, intombazana enothando iyayifuna ukuba yayiyintsebenziswano. Kodwa, musa ukukhawuleza. Ukuba umntu ukwenze isipho esibi kakhulu nesincomekayo, kuthetha ukuba ude kude naye. Amadoda anika abesetyhini izinto kwiintsimbi ezixabisekileyo kuphela xa bephatha kakhulu. Mhlawumbi oku akusiyo inxaxheba, kodwa ke, uhlala kwindawo ekhethekileyo ebomini bakhe. Ngako oko, into eyona nto ayiyikusongela loo mfana. Akunjalo na ukuba ungayiboni ukuba isandi sithi "sisongela" ngomtshato. Ndikholelwe, ngohambo olunjalo uya kumkhokelela ekubeni angene kwaye akuthumele. Xa umntu enomnqweno wokutshata nomntu, ucinga ngexesha elide aze enze isigqibo. Kule meko, loo mfana akaze athatyathwa. Uxinzelelo lwabantu - lubi ngaphezu kokumemeza nokuhlambalaza. Kubonakala kubo ukuba ngale ndlela, umfazi uzama ukuthatha inkululeko kubo. Kwaye emva koko, umtshato, eqinisweni, uyinto yokuthintela inkululeko. Ubuncinane, amadoda amaninzi acinga njalo. Kwaye ukuba bengacingi, kuya kubakho umhlobo osondeleyo oya kumxelela ukuba kulungile kangakanani ukutshata kunye nokuba lukhusela inkululeko kangakanani. Ngelishwa, abafana bayesaba kakhulu ukuthatha isigqibo esinoxanduva kwaye batshata nomntu abathandayo. Kwaye, ukwesaba ngakumbi kumntu, kubonakala ngathi kuye wonke umntu uzama ukumphoqa ukuba enze into aze athathe into kuye. Ngoko ke, ukuba umfana wanikela isandi njengesipho, mbulela kuye ukusuka entliziyweni kwaye uthi uyonwabile kakhulu, kodwa ungacingi ukuba ucinge ngomtshato wakhe. Ekuhambeni kwexesha, uya kufumana esi sigqibo. Kwaye, ngoku, makabe esazi ukuba uyamthanda kwaye uyamxabisa. Ukuba ufuna ukumbonga umntu osemncinci ngokumangaliswa okunjalo, ngoko, ngosuku lwakhe lokuzalwa okanye ngexesha lomhla othile obalulekileyo, unokumnika isipho esibi. Kakade ke, le mfuneko ayifanele ibe yindandatho, njengoko amadoda amaninzi engagqoki izinto ezinjalo. Kodwa, ingaba yintambo, isongo, i-watch, i-perfume eninzi, okanye into ayifunayo ixesha elide, kodwa kungakhathaliseki isizathu esingazange sithenge. Ngokwenza izipho ezinjalo, ugxininisa isimo sengqondo esikhethekileyo kumntu kwaye uziqaphele kwaye aziqaphele ngokucacileyo ukuba le ntombazana iyayazi into ayifunayo kwaye iyayithanda, izama ukumenza ibe mnandi kwaye ingacingi nje ngeminqweno yakhe, kodwa nangenxa yokukhetha kwayo .
Kodwa, mhlawumbi le nsizwa ayizange ikuncede nje, kodwa yanikela yona, ithi ungokoqobo kwaye uyintanda kwaye uyavuya kakhulu ukuba unye kunye. Ngaba amagama anjalo angathathwa njengesiphakamiso? Kungenzeka ukuba izipho ezihamba neentetho ezinjalo zingathathwa njengesilumkiso sokuba kungekudala umfana uya kucela isandla sakho nentliziyo. Ukuthetha amagama anjalo, uyaziqonda ukuba ulungele ukuhlala kunye nawe rhoqo, kodwa uyaziqonda ngokuqhubekayo ngenxa yokoyika kwaye ngoko ke, loo nto ayithethi nto ebaluleke kakhulu. Kodwa, ukuba ubeka ingcongolo ngomnwe kwaye ngexesha elifanayo uthetha ngothando lwakhe olungapheliyo, ngoko unokuthokoza ngokukhawuleza ukuba kungekudala uza kutshata. Nangona, kwakhona, akadingeki ukuba achukumise nantoni na aze amqhubele phambili. Uya kuzibona ngokwakhe. Ukuba insizwa iyakwazi ukuba unentsingiselo yobomi bayo, ngoko ulungele ukuhamba nawe yonke indlela yobomi.
Ngendlela, qaphela uhlobo luni lomthendeleko onjalo isipho. Ukuba, lo ngulo suku lwabo bonke abathandayo, okanye uhlobo oluthile lomhla wakho, kuthetha ukuba isenzo sakhe sihlobo lokuphinda uxoxe ngomtshato. Nangona akayiqondi le nto, i-subconscious ikhetha ngokuchanekileyo le mihla, kuba ufuna ukubonakalisa nje uthando, kodwa neenjongo ezinzulu ezinxulumene nayo.
Kulungile kwaye ziziphi iimeko intombazana enokuqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba le ndoda ingumtshato ngaphambi kokutshata? Ewe, mhlawumbi, kwenzeka xa efika emthonjweni wothando, intsha iguqa, inika iintyatyambo, inika indandatho, njengesipho sokubambisana, kwaye iyabuza malunga nokuba ufuna ukuba ngumfazi. Kule meko, akukho nto yokungaqiniseki. Yonke into icacile kwaye icacile, njengosuku. Ngoko amakhonkco anikezelwa kuphela ukuze athathe umfazi wakho othandekayo kwiofisi yombhalisi kwaye ngoko ke, ngokukhawuleza, ukuvukisana kuzakuqala ngaphambi komtshato.
Inenekazi inothando isoloko ifuna ukuba kwenzeke kanye kanye kwathethwa kwinqaku lokugqibela. Kodwa, ukwenzela ukuba oku kwenzeke, umntu akafanele aqhube amahhashi. Makhe ndikukhumbuze ukuba iindandatho azinikiweyo kubantu abangaziwa kunye namantombazana, apho indoda ingaxhunyiwe ngobudlelwane obunzulu. Sekunjalo, ngokungaqondi, umntu uyaqonda ukuba indandatho isimboli. Kwaye nangona engasifaki kwisipho intsingiselo ofuna ukuyibona, uyaqonda ukuba oku akuyona nje i-trinket, kodwa enye into. Ngoko ke, xa ufumene isandi njengesipho, unokuvuyela ukuba uyintanda, intanda kunye nomfazi obalulekileyo ebomini bakho kumfana wakho.
Isithethe somrhumo wexabiso lomtshakazi
Amathambo aphuca amacwecwe
Iibhasikidi "Iphezulu yehlobo"
I-Tilapia ene-arugula, i-capers kunye neetatayi